Keydka qarsoon |
Home » Archives by category » Keydka qarsoon
Inta shaqada ku maqanyahay seygeedu,iyaduna waxay ku jirta howl maalmeedkedi oo ay waheliso waxbarashadi. Ilahow adiga mahadaas iska leh.…
gabay waqtigan ku haboon
Dal maxaa lagu yeeshaa, dadse maxaa lagu noqdaa?
Qof aan ID card haysanin oo aan Baasaboor lahayn oo aan address ku lahayn dalka uu u dhashay oo weliba qabiilku kala weynyahay muwaaddinimada, deegaan qabiileed uu isir ahaan ka…
SAWIRRO:MW Farmaajo oo warqadaha ka guddoomay danjiraha cusub ee Ingiriiska
Mar 10, 2021 Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waraaqaha aqoonsiga danjiranimo ka guddoomay Safiirka cusub ee Boqortooyada Ingiriiska u qaabilsan Soomaaliya Marwo Kate Foster. Danjire Kate oo…
Mucaaradka iyo Beesha Caalamka oo kulan ka leh muranka ka taagan doorashada.
Feb 25, 2021 Wakiilada Beesha Caalamka oo sadexdii maalmood ee la soo dhaafay kulamo la qaatay Madaxweynayaasha maamulada Puntland, Jubbaland iyo RW Rooble oo uu shalay la kulmay ayaa rajo…
The presidential inauguation of Biden & Kamala